Kedu ụdị ngwá ọrụ ịchọtara nke Amazon ị nwere ike ịkwado m kacha mma?
Na-agba ọsọ nchọpụta nke kwesịrị ekwesị dị omimi bụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe dị mkpa maka ndepụta ngwaahịa Amazon gị, dịka ọ bụ maka ịhazi usoro ziri ezi na Search Engine Optimization. O doro anya na, ọganihu ọ bụla ecommerce na-ere kwesịrị inwe ụfọdụ atụmatụ Amazon keyword finder ngwaọrụ iji mepụta usoro ahịa ahịa. Naanị ịdabere na data data igwe mmadụ, ma na-arụ ọrụ iji nọgide na-echekwa ihu ngwaahịa gị maka mmelite dị elu na ntanetị n'ịntanetị - nke a bụ ihe na-eme ka ahịa nke ọ bụla ụlọ ahịa na ecommerce. Ya mere, n'okpuru ebe a, m ga-edepụta gị ụfọdụ n'ime ihe kachasị mma Amazon na-achọpụta na nchọpụta - iji nọgide na-emelite mgbe nile ma na-agbaso otu nzọụkwụ n'ihu ndị na-asọmpi kachasị gị.
AmzSuite - bụ Amazon keyword finder software nke nwere ike inyere gị aka ịmata ihe niile gbasara ngwaahịa kachasị mma - ọ bụla shred nke data na Ndị Kasị Ahịa Ahịa, Atụmatụ Ndị Kasị Dị Elu, nakwa dị ka Hot New Releases. AmzSuite nwere ihe dịka puku iri asaa na asaa (Amazon UK na Amazon US) na ga-adaba mma maka azụmahịa ecommerce buru ibu, na ọbụna ndị ọkachamara a zụrụ azụ na SEO. N'ezie, nyere ha na ha nwere obi ụtọ ịmara otú e si eme ka ọtụtụ n'ime ngwá ọrụ ahụ nwee ike dị ike.
Kparser - bụ ngwá ọrụ ịchọpụta ihe Amazon ọzọ, oge a n'ụzọ nkịtị. Ihe bụ na Kparser nwere ike ịkwado ndị na-ere akwụkwọ nkwụsịtụ na elu isiokwu na ogologo-ọdụ isi okwu aro. Ịchịkọtakwu ihe omimi miri emi na nchịkọta dị mma, nhọrọ a bụ nhọrọ kasị mma nke ndị na-ere ákwà ndị nwere ọtụtụ ihe ị ga-eme. M na-ekwu na atụmatụ Kparser bụ usoro dị mfe maka ịhazi, nhazi, na ịkọpụta ihe ị chọpụtara nke a ga-enwe ike ịmịchaa ngwa ngwa na ọsọ ọsọ.
MerchantWords - bụ ihe atọ kachasị mma Amazon na-achọta, ma e wezụga nke ndị na-eduga n'elu-ere ákwà na-arụ ọrụ na nke ọzọ nkwenye ecommerce kwa. Ngwa ahịa ahịa MerchantWords nwere nnukwu nchekwa data juputara ihe nde nde nde Amazon nke ndị ezigbo ahịa na-eji na-achọ ahịa ahịa kwa ụbọchị. N'etiti akụkụ ndị ọzọ dị ike nke onye inyeaka a n'Ịntanet, m ga-achọ ịmepụta na ọ ga-abụ ngwọta zuru ezu nke a haziri ahazi karịsịa maka ndị na-enweghị ahụmahụ ma ọ bụ ọbụna ndị na-ere ahịa na-esite na mbido - enweghị ike dị na SEO mkpa iji mee ka ọtụtụ n'ime gị nnyocha nyocha na ihe bara uru maka nchịkọta ngwaahịa na-egbu egbu n'ezie.
Okwu Ngwá Ọrụ Dominator - abia dịka nhọrọ ikpeazụ isiokwu isiokwu ga-edepụtara maka taa. Ndi mmadu na - ekwu na aha ngwá ọrụ ahụ na - ekwu maka onwe ya - ebe ọ bụ na ihe karịrị puku mmadụ iri na ise na - adabere na nchekwa data ya iji melite ahịa ha, ọbụnakwa na - ebuli elu karịa ebe ọzọ, dịka ọmụmaatụ na onye ọhụụ na Google. Ya mere, ọ bụrụ na ịchọrọ naanị nkọwa kachasị mma, mgbe ahụ ị ga-achọpụta Ngwá Ọrụ Ngwá Ọrụ Dominator gị ụlọ nkwụsịtụ - na-anwale ihe ndekọ bụ isi maka n'efu, ma tụlee isonyere obodo ahụ na nsụgharị zuru ezu maka ihe dịka dollar 50 Source .